Dhamma Talk Video by Dhammacriya University Sayadaw Bhaddanta Thuseiktha Vivamsa <!-[if Webkit]> <![endif]-> <!-[if Konq]> <![endif]-> <!-[if Opera]> <![endif]-> <!-[if FF]> <![endif]->
Bhaddanta Thuseiltha Vivamsa
လှည်းကူးမြို့၊ ဓမ္မာစရိယဥယျဉ်ကျောင်းတိုက် နာယကချုပ်ဆရာတော်
မန ္တလေးမြို့ မစိုးရိမ် တိပိဋက ပါဋိ မြန်မာ အဘိဓာန် ကျမ်းပြု အဖွဲ့ဝင်
ကျောင်း လိပ်စာ။ ရန်ကုန် - အလိုတော်ပြည့် ဓမ္မာစရိယတက္ကသိုလ်
Agga Maha gandha Vacaka Pandita
Bhaddanta Thuseiktha Vivamsa
Rector of the Yangon Dhammacariya University
Rector of the Sittwe Dhammacariya University
Patron of the Dhamma Thidagu Kyaung - Mandalay Masoyein New University
Yangon Dhammacariya University
Sittaung Street, Dagon Myothit, Saikkan Township, Yangon
ရန်ကုန် ဓမ္မာစရိယတက္ကသိုလ်ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာကို Google Earth မှ ကြည့်လိုလျှင် အောက်ပါ Link တွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်။
- ကိုယ့်ကိုကိုယ်မြှင့်၊ လူလိုကျင့်၊ လူနှင့်တူပါစေ
- မကောင်းမှုရှင်း၊ ကောင်းမှုသွင်း၊ စိတ်ရင်းဖြူပါစေ
- အဲဒါမှ - ဗုဒ္ဓဝါဒ - ကမ္ဘာ့မင်္ဂလာတွေ
- ရသမျှနှင့် ရောင်ံရဲ၊ ရှိသမျှနှင့် တင်းတိမ်
- လျှောက်ပတ်သည်ကို သုံးစွဲ၊ ဘယ်တော့မှ မဆင်းရဲ။
- ကောင်းကံ -ဆိုးကံ၊ ဤနှစ်တန်၊ အမွေခံရမည်။
- ကောင်းကံပြုက၊ ဒို့ဘဝ၊ မုချ ချမ်းသာမည်။
- မကောင်းမှုကံ၊ ပြုတုံပြန်၊ ဧကန် ဆင်းရဲမည်။
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ်တွင် အလိုတော်ပြည့်ဓမ္မာစရိယတက္ကသိုလ် နာယကချုပ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန ္တသုစိတ္တာဘိဝံသ မှ ဓမ္မာစရိယ စာချတန်းအတွက် သင်ကြားပို့ချသော စာဝါ များ
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၁)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၂)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၃)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၄)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၅)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၆)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၇)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၈)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (10)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၁၀)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၁၁)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၁၂)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၁၃)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၁၄)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၁၅)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၁၆)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၁၇)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၁၈)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၁၉)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၂၀)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၂၁)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၂၂)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၂၃)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၂၄)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၂၅)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၂၆)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၂၇)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၂၈)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၂၉)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၃၀)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၃၁)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၃၂)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၃၃)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၃၄)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၃၅)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၃၆)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၃၇)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၃၈)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၃၉)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၄၀)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၄၁)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၄၂)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၄၃)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၄၄)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၄၅)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၄၆)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၄၇)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၄၈)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၄၉)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၅၀)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၅၁)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၅၂)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၅၃)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၅၄)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၅၅)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၅၆)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၅၇)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၅၈)
၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း စာဝါ အမှတ် (၅၉)
၁)	ရန်ကုန် ဓမ္မစရိယ တက္ကသိုလ်၏ တစ်နေ့တာ ပုံရိပ်များ (ဗီဒီယို)
၂) ၆-၁-၂၀၁၂ ဗုဒ္ဓရဲ့အသက် ဘယ်သူဆက်သလဲ တရားတော်
၄) ၁၂-၂-၂၀၁၂ ဆရာတော်ဦးသုစိတ္တ၏ ရေစက်ချအလှု သြဝါဒ
( ဓမ္မာစရိယတက္ကသိုလ် နာယကချုပ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန ္တသုစိတ္တာဘိဝံသ မှ တရိုတသေ သိမ်းဆည်းထားသည့် ဤ ရှားရှားပါးပါး မှန်ကန်သော ဗုဒ္ဓသာသနိက မြေပုံ နှင့် ပဌဝီကျမ်း စာအုပ်ကို Internet ပေါ် တင်ပြရန် dhammadownload အား လှုဒါန်းလိုက်ပါသည်။)
မန ္တလေးမြို့၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ် နာယကအဖွဲ့ဝင်၊ ရန်ကုန်မြို့ ဓမ္မာစရိယာတက္ကသိုလ် နာယကချုပ်၊ ဘဒ္ဒန ္တသုစိတ္တာဘိဝံသ၏ သက်တော်(၅၀)ပြည့် ရွှေရတုမော်ကွန်း
- မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၂၇၊ တပေါင်းလဆန်း (၈)ရက်၊ မောင်မြရွှေ အသက် (၉)နှစ်ပြည့်နေ့တွင် ရခိုင်ရိုးရာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ထုံဓလေ့အတိုင်း ဇာတိရွာ၌ သရက်တောင် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန ္တ သုန္ဒရကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြုလျက် သုစိတ္တရ ဘွဲ့ဖြင့် မိခင်ကြီးဒေါ်ညိုနှင်းက ရှင်သာမဏေပြုပေးခဲ့သည်။
- ၁၃၃၇ ခုနှစ် နယုန်လတွင် ဝါခင်းကုန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန ္တတိက္ခ (ယ္ခု -တောင်စလင်းတိုက်သစ် ပဓာန နာယကဆရာတော်)၏ ကူညီဆောင်မမှုဖြင့် မစိုးရိမ်တိုက်သစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ရှင်သုစိတ္တသည် မစိုးရိမ်တိုက်သစ် ဓမ္မဒါယာဒ ကျောင်းနာယကဆရာတော် ဦးရာဇဓမ္မဘိဝံသ (ယ္ခုလက်ရှိ မစိုးရိမ်တိုက်များ၏ အဓိမတိ မဟာနာယက) ထံတွင် ခိုလှုံ၍ ဓမ္မစရိယတန်းကို အောင်မြင်အောင် အပတ်တကုတ် ကြိုးစားခဲ့ပါသည်။၁၃၃၈-ခုနှစ်တွင် အစိုးရဓမ္မာစရိယတန်းကို ဆရာတော် ဦးရာဇဓမ္မဘိဝံသထံ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုရာ သုတ်သီလက္ခန် ပါဠိအဋ္ဌအထာကျမ်းကို အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။
- ၁၃၃၈-ခုနှစ် နယုန်လဆန်း (၃)ရက် ကြာသာပတေးနေံ နံနက် (ရး၂၉)နာရီ အချိန်တွင် မန ္တလေးအရှေ့မြောက်မြို့နယ်၊ သက်ပန်းကျောင်းတိုက်၊ ရွှေစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ခဏ္ဍသိမ်တော်၌ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အဘိဓဇ မဟာရဋ္ဌဂုရု၊ မစိုူရိမ်တိုက်သစ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန ္တသီရိန္ဒာဘိဝံသကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြု၍ မန ္တလေးအရှေ့တောင်မြို့နယ်၊ မောရဂီဝါရပ်၊ ရွှေနန်းသိင်္ဂ ီဆေးတိုက်ကိုင်ရှင် ဘကြီးတော်သူ ဆရာခင် + ဒေါ်မြရင် မိသားစုတို့၏ ပစ္စယာနုဂ္ဂဟဖြင့် မြင့်မြတ်သော ရဟန်းဘဝသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
- ၁၃၄၄-ခုနှစ်တွင် မန ္တလေးမြို့၊ ပရိယတ္တိသာသနဟိတ (သကျသီဟ) စာသင်တန်းကို နံပါတ်(၁) ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်ပြီး၊ မြင်းခြံပရိယတ္တိသဒ္ဓမ္မပါလ စာချတန်း အဋ္ဌကထာကြီး (၃)ကျမ်းလုံးကို တနှစ်တည်းဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သဖြင့် "ဘဒ္ဒန ္တသုစိတာ ဘိဝံင - ပရိယတ္တိသဒ္ဓမ္မပါလ ဓမ္မာစရိယ" ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ကို ရရှိခဲ့လေသည်။
"သကျသီဟ" ဘွဲ့တံဆိပ်ရရှိဖို့ဆိုသည်မှာ ပြဒါးရှင်ဓါတ်လုံးဖြစ်အောင် ဖိုထိုးရသည်ထက်ပင် ခက်ပါသေးသည်။ မန ္တလေးမြို့၊ ပရိယတ္တိသာသနာဟိတအသင်းမှ ၁၂၆၅-ခုနှစ်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့သော ပရိယတ္တိသကျသီဟ စာမေးပွဲငို လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးကပင် "ဉာဏ်ကောင်းသူများကို ရွေးချယ်သတ်ပြစ်နေတဲ့ လူသတ်စာမေးပွဲ" ဟု ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့ပါသည်။ ပရိယတ္တိစာသင်တန်း၊ စာချတန်းတို့၌ ပြဋ္ဌာန်းထားသော ကျမ်းစာများမှာ အလွန်များပြားလှရုံမက စာမေးပွဲဖြေဆိုလိုသောပုဂ္ဂိုလ်များသည် စာမေးပွဲ မဝင်မီ သင်းကြီးများရှေ့တွင် နှုတ်တက်အာဂုံဆောင်၍ အစမ်းသပ်ခံကြရပါသေး၏။ ကျေကျေညက်ညက်ရမှ စာမေးပွဲ ဝင်ခွင့် ရကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စာသင်တန်းနှင့် စာချတန်း၊ နှစ်တန်းလုံးကို အသက် (၃၅)နှစ်မတိုင်မီ အောင်မြင်အောင် ဖြေဆိုနိုင်မှသာ "သကျသီဟ" ဘွဲ့တံဆိပ်ကို ချီးမြှင့်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- မစိုးရိမ်တိုက်ကြီးနှစ်တိုက်၏ အဓိပတိမဟာနာယက ဆဋ္ဌသံဂါယနာ ဝန်ဆောင်သံဃာ့အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၊ အစိုးရပထမကျော်၊ ပရိယတ္တိသာသနာဟိတဓမ္မာဏရိယ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု ဘဒ္ဒန ္တသူရိယာဘိဝံသမှာ ပထမဆုံး သကျသီဟ အဘိဝံ -ဖြစ်ပြီး ဘဒ္ဒန ္တသုစိတ္တာမှာ (၂၉၆)ပါးမြောက် သကျသီဟ အဘိဝံသ ဖြစ်ပါသည်။ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်အနေဖြင့် ဆိုပါမူ ငါးပါးမြောက် သကျသီဟ အဘိဝံသ - ဘွဲ့ရ ဆရာတော်ဖြစ်ပါ၏။ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်မှ ယ္ခုအချိန်အထိ အဘိဝံသ (၂၃)ပါး ပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်၏ ပရိယတ္တိအရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မစိုးရိမ်တိုက်ကြီး အောင်မြင်ကျော်ကြားခြင်းမှာ စာသင် စာချ ရဟန်းသံဃာများမှအပ အခြားရဟန်းသံဃာများ လုံးဝ မရှိခြင်းကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
- ဘဒ္ဒန ္တသုစိတ္တဘိဝံသသည် ဓမ္မသီတဂူကျောင်း၌ သီတင်းသုံးလျှက် ကျောင်းထိုင်နာယက စာချတာဝန်များထမ်းဆောင်ရင်း ၁၃၄၈-ခုနှစ်မှ ၁၃၆၂-ခုနှစ်အတွင်း မစိုရိမ်တိပိဋက ပါဠိ+မြန်မာ အဘိဓာန်ကျမ်းပြုအဖွဲ့၌ ပါဝင်ကာ တိပိဋကပါဠိ+မြန်မာအဘိဓာန်နှင့် ပါဠိပဒပိတိဋကကျမ်းညွှန်းတို့ကိုလည်း ရေးသားပြုစုခဲ့၏။
- ၁၃၅၆-ခုနှစ်တွင် မော်လမြိုင်မှ မန ္တလေးသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီး မစိုးရိမ်တိုက်သစ်တွင် သီတင်းသုံးကာ ကျောင်းထိုင်နာယက စာချတာဝန်များငို ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ရင်း စာချတန်းအတွက် လိုအပ်နေသော ပါရာဇိကဏ်ဝါကျဥယျာဉ် ပ-ဒု နှစ်တွဲကိုလည်းကောင်း၊ ဝိဂ္ဂဟနှင့် ဉာသ်ကောက်လမ်းညွှန်ကျမ်းနှင့် အတ္ထယောဇနာနယူအဒေသကျမ်းတို့ကိုလည်းကောင်း ပြုစုရေးသားခဲ့ပြန်သည်။
-၁၃၅၆-ခုမှ ၁၃၆၂-ခု အတွင်း မန ္တလေး၌ နေထိုင်စဉ် ၁၃၅၆-ခု ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေ စတုတ္ထအကြိမ် ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သံဃာ့ အဖွဲ့အစည်းကြီး၌ မန ္တလေး မဟာအောင်မြေမြို့နယ်မှ သမ္မုတိရသံဃာ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၃၅၆-ခုမှ ၁၃၆၂-ခုအထိ၊ မန ္တလေး မဟာအောင်မြေမြို့နယ် သံဃာ့ဝန်ဆောင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၃၅၆-၁၃၅၇-ခု နိုင်ငံတော် အစိုးရ ပါဠိပထမပြန် စာမေးပွဲ၊ မန ္တလေးမဟာအောင်မြေမြို့နယ် အ-ထ-က (၂၄) ပထမလတ်တန်းစာဖြေဋ္ဌာန ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှုအဖြစ်လည်းကောင်း၊ သံဃာ့တာဝန်များကို ကြေပွန်စွာထမ်းရွက်ခဲ့သည်။
- ၁၃၅၅-ခုနှစ်တွင် နွေရာသီ ဓမ္မစရိယသင်တန်းကို တီထွင် ဖွှု့်လှစ် သင်ကြားခဲ့ငည်။ မန ္တလေးသို့ ပြန်ကြွပြီးနောက်တွင်လည်း ၁၃၅၆/၅၇-ခု နွေရာသီများတွင် မော်လမြိုင်သို့ ကြွရောက်ငာ ဓမ္မစရိယသင်တန်းကို ပို့ချပေးခဲ့လေသည်။
-၁၃၅၈၊ ၁၃၅၉၊ ၁၃၆၀-ခုနှစ်များတွင်တော့ မန ္တလေး မစိုးရိမ်တိုက်သစ်တွင် သင်တန်း ပို့ချပေးခဲ့တော့သည်။
- ၁၃၆၄-ခုနှစ် (၄-၁-၂၀၀၃) သက်တော် (၄၆)နှစ် အရွယ်မှာပင် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ဆက်ကပ်လှုဒါန်းသော "အဂ္ဂမဟာဂန ္တဝါစကပဏ္ဍိတဘွဲ့" တံဆိပ်ကို လက်ခံ ရရှိခဲ့ပါသည်။
၁။ ပါရာဇိကဏ် ဝါကျဥယျာဉ် - ပထမတွဲ (ဘဒ္ဒန ္တသုစိတ္တာဘိဝံသ)
၂။ ပါရာဇိကဏ် ဝါကျဥယျာဉ် - ဒုတိယတွဲ (ဘဒ္ဒန ္တသုစိတ္တာဘိဝံသ)
၃။ သီလက္ခန်ဝါကျဥယျာဉ်-ပထမတွဲ (ဘဒ္ဒန ္တသုစိတ္တာဘိဝံသ)
၄။ သီလက္ခန်ဝါကျဥယျာဉ်-ဒုတိယတွဲ (ဘဒ္ဒန ္တသုစိတ္တာဘိဝံသ)
၅။ အဋ္ဌသာလိနီဝါကျဥယျာဉ်- ပထမတွဲ (ဘဒ္ဒန ္တသုစိတ္တာဘိဝံသ)
၆။ အဋ္ဌသာလိနီဝါကျဥယျာဉ်- ဒုတိယတွဲ (ဘဒ္ဒန ္တသုစိတ္တာဘိဝံသ)